सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: समय : सांझ
कवि इश्वरवल्लभको अन्तर्वार्ता लिन्छु भन्दाभन्दै आफ्नै हातबाट चिप्लंदै गएको समय सीमान्तमा कैद गर्दै छौं आजको यो सांझ । मेरो शब्दबिम्बमा सदा कविताको बोधिवृक्षमुनि समाधिस्थ वस्तुता’, सम्पूर्णताका अग्रगामी जीवनधुन, आफ्नै परम्परासंग सचेत प्रश्नहरूको पहाडबिम्ब कविर् इश्वरवल्लभको कवितामय संसारमा तपाईं देवताको प्रेमनिवेदन सुन्न सक्नुहुनेछ र हृदयभरि रहस्यमय जीवनगीत बजिरहनेछ ।
इश्वर वल्लभनमस्कार दाइ ! नमस्कार ! मैले नगरेको गल्तीको माफ गर्नुस् है ! जामले गर्दा चार मिनेट ढिलो भएं ।कवयित्री गीता कार्की र इश्वर दाइ र म एउटै टेबुललाई केन्द् बनाएर बसेका छौं
- दाइलाई यो सांझ कस्तो लागिरहेछ ?
- जीवनको यो मोडमा आइपुग्दा तपाईं आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नै जिन्दगीको सापेक्षतामा कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
- त्यसो हो भने यो जिन्दगीसम्म आइपुग्दा आफ्नो विगतको चाहिं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त ?
- दाइले कविता लेख्दा रहस्य’ वा वस्तु’ केलाई समाउनुहुन्छ ?
होइन, लेखनमा त आग्रह पो गरेका छौं । आग्रह भनेको जीवनसित आग्रह । कहिले-कहिले लेख्दाखेरि अलिकति पहिले नै तिमीहरू के लेख्छौ -’ भन्दा जीवन’ लाई लेख्छौं भनेर भन्यौं । त्यो बेलामा सोझै अर्थ लगाएर भन्दा जीवन’ भन्यौं र जीवन त्यो तपाईं बुझनेले पनि जीवन बुझयो, म भन्नेले पनि जीवन त भनें तर सांच्चै नै त्यसलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने सुन्नेले पनि एउटा ठूलो आकाशतिर जानुपर्छ, भन्नेले पनि ठूलो एउटा क्षितिजतिर जानैपर्छ । शब्द पो जीवन’ भयो त । दुवैतिर त्यसको गहिराइ, त्यसको विशालताको व्याख्या गर्न अर्कै समय चाहिन्छ ।
- तपाईं तेस्रो आयाम’ का एक सारथि । जीवनलाई बुझने सांचो तेस्रो आयाम’ अर्थात् गहिराइ’ लाई तेस्रो आयामका सर्न्दर्भमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो त ?
मैले अहिलेसम्म सकेको छैन । हामीले यस्तो गर्ने’ भनेर आदर्श राख्यौं, अर्थात् जीवनलाई सम्पूर्ण’ गर्नुपर्छ भन्यौं त कहिले जीवनलाई जस्तो छ त्यस्तै लिनुपर्छ भन्यौं, कहिले मानसिक परिप्रेक्ष्यको सापेक्षमा हेर्नुपर्छ पनि भन्यौं । त्यो भन्ने क्रममा आयामदेखि यहांसम्म आइपुग्दा अघि भनेजस्तो त्यो रहस्य त हुदै हो, त्यसलाई व्याख्या गर्न त सकिंदैन तर व्यावहारिक रूपमा आदर्श’ चाहिं उभ्याउंदाखेरि हामीले के भन्यौं भने जिन्दगीको सम्पूर्णता हुनुपर्छ है । एकाङ्गी होइन जिन्दगी भनेर भन्यौं । सम्पूर्णता निर्माण गर्ने क्रममा जतिसक्दो हामीले गर्यौं तर अहिले आएर त्यो कुरा पूर्ण भयोजस्तो लाग्दैन ।
- त्यसो हो भने कतै तपाईं पनि इन्द्रबहादुर र्राईजस्तै लीला’ तिरै लाग्नुभएको त होइन ?
लीला’ मेरा लागि एउटा समस्या भएको छ । इन्द्रबहादुर र्राईले कुन्नि के सोचेर लीला’ भन्नुभयो, त्यसलाई रूपरेखामा लेख्नु पनि भयो । एउटा विचारका रूपमा अभ्रि्राय प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । मलाई भने के समस्या पर्यो भने उहां कुन चिन्तनको अवधारणामा लीला’ भनेर अघिल्तिर बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस सम्बन्धमा मेरो राम्रो संवाद भइसकेको छैन । तर लीला’ को वास्तविक सिद्धान्त म कहिले-कहिले प्राविधिक रूपमा सोच्छु कि यो पूर्वीय लीला हो या पश्चिमी लीला हो । पश्चिमतिर त लीला’ लाई लीला’ नभनीकन इल्युजन’ अर्थात् भ्रम पनि भन्छन् । हाम्रो पूर्वमा त्यो भ्रम होइन । त्यसमा त विचित्रताहरू हुन्छन् । इन्द्रबहादुर र्राईले त भगवान् श्रीकृष्णको उदाहरण पनि दिनुहुन्छ । कंसको सभामा जांदा कृष्णलाई बलियो मान्छेले पहलमान देख्यो, आमाहरूले देख्दा वात्सल्यपूर्ण सुन्दर सुकुमार देखे । यसरी अन्य त्यस्तैहरूले सापेक्षकि रूपमा कृष्णलाई देखे । त्यो लीलात्मकता हो भनेर उहांले व्याख्या गर्नुभयो तर जहांसम्म साहित्यिक चिन्तनको हिसाब छ, मैले त त्यतातिर सोचेको छैन । लीलाकै कुरा गर्ने हो भने त महाभारत, रामायणलाई जित्नै सक्तिनं । त्यहांबाट छुट्टयाएर मैले भिन्न मेरो सोचको लीला’ बाहिर ल्याउनुपर्यो; त्यतातिर लाग्न मलाई गाह्रै पर्छ । त्यतातिर म सोच्दिनं पनि, जांदिनं पनि ।
- त्यसो हो भने जिन्दगीलाई सम्पूर्णमा व्यक्त गर्न नसक्नुलाई कुन नाम दिनुहुन्छ त ?जिन्दगीलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा त व्यक्त गरिरहेछु । जिन्दगीमा त्यो गर्छुभनेर आदर्श सोच्यो भने त्यो हुदैन होला तर जब तपाईं सोच्नुहुन्छ, तपाईं त्यहां प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ; ज्यादाभन्दा ज्यादा तपाईं त्यसलाई अनुभूत गरेर तपाईं अभिव्यक्त गरिहाल्नुहुन्छ र अभिव्यक्तिको निरन्तरतामा त्यसको प्रतिशत बढ्न थाल्छ । जति प्रतिशत बढयो, त्यति नै पूर्णतातिर अघि बढ्छ ।
- तपाईंको विचारमा पूर्णता कहिले होला त ?
अहिले हुदैन, छिटो हुदैन, त्यो धेरै प'र छ तर अघिल्तिर बढ्दा म एकबाट अघि बढेर दुइमा पुगें भने दुइसम्म त बढयो नि । एउटा रेखीय हिसाबले तीनमा पुग्दा दुइदेखि अगाडि नै बढेको हुन्छ । यदि त्यो तीनलाई पूर्ण मान्नुभयो भने मान्नुभयो तर नमान्नुभयो भने त्यसपछि अनन्त छ भनेर मान्नुस् । यसैले अघिल्तिर त सरेकै हो । सायद, मेरा कविताहरू, सायद मेरा चिन्तनहरू, सायद मेरा मात्र होइनन्; अरूका पनि त्यही नै हुन् एक " दुइ " तीन' अर्थात् यात्राहरू आदर्शतिर अगाडि बढ्दछन् ।
- सापेक्षकि बढाइ त छ, यसको अर्थ अन्त चाहिं छैन होइन त दाइ ?
- तपाईं गद्यमा त्यत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ । कथा पनि लेख्नुभएको छ र निबन्ध पनि लेख्नुभएको छ । यहांले सबैभन्दा सन्तुष्टि कुन विधामा पाउनुभएको छ ?
- सन्तुष्टि मिल्दै नमिल्ने हो भने किन लेख्ने त ?
- जे होस्, सन्तुष्टिको पूर्णविराम खोज्दै हुनुहुन्छ ?
- यसको अर्थ जीवनलाई सम्पूर्णतामा व्यक्त गर्न सकिएन, होइन त ? सकिन्न' सकिन्न, गाह्रो छ । जीवनलाई सम्पूर्णतामा अथवा कवितालाई सम्पूर्णतामा अथवा कथालाई सम्पूर्णतामा हामी भन्न सक्दैनौं ।
- त्यसो हो भने तेस्रो आयामको सम्पूर्णताको सफलता प्रश्न चिन्ह रह्यो ?
हो, अहिलेसम्म प्रश्न चिन्ह नै रह्यो । अस्ति इन्द्रबहादुर दाइ काठमाडौं आउनुभएको थियो । उहांले लीला’ को कुरा गर्नुभयो । त्यो बेलामा मैले उहांहरूकै सामुन्ने के भनें भने आयाम’ लाई हामीले बनाएकै यस बेलासम्म पचास वर्षपुग्न आंटयो, अहिलेसम्म मैले आयामलाई बिट मार्न सकेको छैन । फेरि मैले अर्को नयां सिद्धान्त लिएर हिंडें भने त्यसलाई बिट मार्नु त कहां हो कहां' । यथार्थिक रूपमा अब म भ्याउंदिनं । तब बिट मार्नै सक्दिनं भने यो आयामलाई नै पहिले म बिट मारूं; त्यसलाई सकूं; भयो, पुग्यो भनेर भनूं र त्यसपछि उमेरले भ्यायो भने अर्कोतिर हेर्छुत्र म लाग्दिनं ।
- बिट मार्ने प्रयास त भइरहेको छ नि । त्यो प्रयासका सर्न्दर्भमा तपाईंको लेखन कतातिर गइरहेको छ नि ?
- त्यसो हो भने तपाईं उत्तरआधुनिकताको बहुलवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
- कसैले तोक्दैमा त्यो उत्तरआधुनिक हुन्छ त ?
- तपाईंका विचारमा उत्तरआधुनिक धारणाहरू के-के हुन् त ?
- यसको अर्थ अस्तिको पृष्ठभूमिसहित सचेतताको प्रारम्भ जहांबाट हुन्छ, त्यो उत्तरआधुनिक सोच हो ?
हो, अस्तिसम्मको चेतना जो तपाईंले अनुभव गर्नुभयो; हृदयङ्गम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चेतनाभन्दा अझै अर्कै चेतना पनि छ भनेर तपाईंले जोड्नासाथ पछिको आधुनिक स्वाभाविक रूपले उत्तरआधुनिक भइहाल्छ । जब म यी जम्मै मेरा कुराहरू आधुनिक भन्न थाल्छु, जब म यी कुराहरूलाई नयां दृष्टिकोणको भन्न थाल्छु, जब मैले मेरा छिमलसित चालीस-पचास वर्षगरेका कामहरू अलिकति भएन, यसलाई अलिकति थप्दा पनि हुन्छ भन्नासाथ त्यहां अर्को विचार सुरु हुन्छ । त्यो अर्को विचारलाई विशेषण दिने हो भने त्यो अस्तिको-हिजोसम्मको विचारभन्दा त अर्को विचार भयो नि । भन्नुस् त बहिनी । त्यो उत्तरआधुनिक विचार हो कि होइन ।- त्यसो हो भने तपाईं आफ्नो लेखनमा विशेषणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ ?हो, अघि मैले भनें; विशेषण चाहिन्छ है । यो समयलाई पनि विशेषण चाहिन्छ । जस्तो उत्तरआधुनिक विचार कम्युनिस्टहरू मन पराउंदैनन् किनभने उसको जो एकै ठाउंमा, एउटै पोखरीभित्र बस्ने बानी हुन्छ नि; त्यसमाथि आघात पर्छ, उसको मार्क्स मर्छ, उसको लेनिन हार्छ अनि उसले उत्तरआधुनिकता मन पराउंदैन । जुन दिन लेनिन पनि चेन्ज हुन्छ, मार्क्स पनि चेन्ज हुन्छ उसको विचारमा पनि नयां विचार थप्न सकिन्छ अर्थात् विचार हटाउन सकिन्छ; त्यो पक्षले सोचेको दिन त्यो उत्तरआधुनिक सोच हो, त्यो सायद वास्तविक सोच पनि हो ।
- उत्तरआधुनिकताका सर्न्दर्भमा कसको चेतनाको सुरुआतलाई तपाईं उत्तरआधुनिक मान्नुहुन्छ ?अचेल उत्तरआधुनिक हल्लाहरू नेपालमा पनि खुब आइरहेको छ; त्यो हल्लाभित्र म पनि छु, हामी सबै छौं । कहिलेकाहीं यो उत्तरआधुनिक कहां सुरु भयो भनेर सोच्छु । धेरैले लिन्छन् डेरिडाको नाम । यिनले सबै स्थितिहरूलाई सिद्धान्तीकृत गरेर सम्प्रेषण गरे, एउटा दृष्टि दिए र सबैले सोच्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो । यथार्थ त पहिलेदेखि नै छंदै थियो तर डेरिडा, सस्युरलगायतका समूहले सिद्धान्तीकृत व्याख्या गर्न थालेपछि डेरिडाको नाम आएको हो । त्यही रूपमा हामी डेरिडालाई मान्छौं, म मान्छु । फेरि चालीस-पचास वर्षहिले हामीले आयाम’ गर्दा डेरिडा पनि भर्खरर्-भर्खर केही गर्दै थिए । त्यो बेलामा हामीलाई डेरिडा अर्थात् कोही पनि थाहा थिएन । त्यति बेला हामी आयाम’ मा के भन्थ्यौं भने- "पुरानाहरूको पूर्णविराम लाग्यो; हामी जम्मै नयां वाक्यहरू हौं ।" उत्तरआधुनिक सोच त वहां भइसकेका पो रहेछौं त । त्यसो हुनाले उत्तरआधुनिक सिद्धान्त बनाउनु डेरिडाको विशेषता हो तर उत्तरआधुनिकताको सुरु त पहिले नै भइसकेको थियो र हामीमा पनि भइसकेको थियो ।
- नेपाली कवितासाहित्यमा तेस्रो आयाम’ नै उत्तरआधुनिकताको स्पष्ट सिद्धान्तीकृत प्रारम्भ-विन्दु हो भनेर ठोकुवा गरे हुन्छ ?
त्यसो गर्दा के हुन्छ भने तेस्रो आयामले गरेका यात्राहरू र अभ्रि्राप्तिहरू एउटा खोपामा लगेर हालेजस्तो हुन्छ । हामीलाई उत्तरआधुनिक हुनुपर्ने केही जरुरी छैन । मैले त स्वभाव पो थियो भनेको त । जम्मै आयाम उत्तरआधुनिकले लग्यो भने त त्यो त खोपाभित्र छिर्छ । आयाम’ आंफैं एउटा विशेषण लिएर अघिल्तिर बढेको छ, उल्लाई उत्तरआधुनिक हुनु केही आवश्यक छैन तर भाषा, विचार र प्रश्नका दृष्टिले उत्तरआधुनिक सोच चाहिं त्यहां पनि थियो ।
- निबन्धकार या कवि कुन रूपमा चिनाउंदा आफूलाई खुसी लाग्छ ?
- २०२९ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त तपाईंको कविता-कृति आगोका फूलहरू हुन् आगोका फूलहरू होइनन्’ शीर्षकले सानोमा म निकै छोइएकी थिएं । कहां फुल्छन् होला आगोका फूलहरू - भन्दै आंफैंलाई प्रश्न सोधेकी थिएं । लाग्छ, त्यतिखेरबाटै मेरो मन-मस्तिष्क कवितामय बनेको थियो र इश्वरवल्लभको आवाजले मलाई कविताको मोह जगाएको थियो । के तपाईं स्वयम्लाई पनि आफ्ना अरू कृतिहरूका तुलनामा त्यो कृतिको शीर्षक साह्रै सुन्दर लाग्दैन
लाग्छ, एकदम लाग्छ । झन्नै-झन्नै त्यो शीर्षक प्रकाशकका तर्फबाट एक जना साहित्यकारले छोटो पारिदिन खोज्नुभएकोथियो । "मलाई यही नै मन पर्यो, मेरो आग्रह नै यही शीर्षक हो" भनें, अनुनय नै गरें त्यसपछि त्यो शीर्षक यथावत् बांच्यो । त्यो शीर्षकको सौर्न्दर्य अहिले पनि झन् सम्पूर्ण व्याप्त भएजस्तो लाग्छ । हुन् र होइनन्को ध्वनिले जीवन र जगत्को सम्पूर्ण स्वभावै दिन्छ । यही सोचले जन्माएको हो, त्यो शीर्षक ।- तपाईं साहित्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ -पहिले-पहिले त ठूलो-ठूलो अनि भावुक कुराजस्तो गरिन्थ्यो तर अहिले त अभिव्यक्ति’ नै जस्तो लाग्छ, जहां शब्दबिम्बहरू माध्यम हुन्छन् ।
- साहित्य र जीवनको अर्न्तर्सम्बन्धलाई एकै शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
अघिकै शब्द अभिव्यक्ति’ नै भन्दा हुदैन र ।- अभिव्यक्ति त रङ्ग अनि धुनका माध्यमबाट पनि गरिन्छ नि ।
तर साहित्यको आफ्नो परिभाषा चाहिएन र ?
- यहांले लेखनमा के-कस्ता जोखिमहरू उठाउनुभएको छ ?
तेस्रो आयामका सर्न्दर्भमा धेरै उठाएका छौं । सबैले मानेर आएको छन्द बहिष्कारको जोखिम, वस्तुता खोज्ने क्रममा भाषा भत्काउने जोखिम, विचारको जोखिम जसमा हामीले सम्पूर्ण कवितालाई बिम्ब भन्यौं । त्यति बेला त परम्परामा प्रश्नचि≈न उठाउंदा हामीलाई भाषा भत्काउने, भांच्ने भनेर आरोप लागेको थियो । तर परम्पराभन्दा अलग सोचेकाले नै आज हामी यहां छौं ।
एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिऊं- त्यसबेला दार्जिलिङमा वैरागी काइंला, इन्द्रबहादुर र्राई हामीहरू हुंदा एउटा निमन्त्रणापत्र पठायौं । त्यसमा मुन्तिर लेखिएको थियो- "तिमीहरूलाई मन परे आऊ, कुरा सुन्छौ भने आऊ नत्रभने नआए पनि हुन्छ ।" मान्छेहरू आएनन् । डेढ सय दुइ सय आउंथे तर त्यति बेला मात्र दस जना आए तर हामीले मजासंग कविता पनि सुनायौं ।
- तेस्रो आयामका त्रिमुर्तिहरू संगै यात्रा गर्नुभयो तर यहांले आफूलाई कुन अर्थमा बेग्लो ठान्नुहुन्छ ?
आयामको आन्दोलनमा हामी एउटै धरातलमा उभिएर पनि अहिले हाम्रो विचार आ-आफ्नै पखेटामा उडेको छ । त्यसैले इन्द्रबहादुर इन्द्रबहादुर नै हो, वैरागी काइंला वैरागी काइंला नै हो र्रर् इश्वरवल्लभर् इश्वरवल्लभ नै हो ।
- लेखकले रचना सिर्जना गरेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ भन्छन् नि ?
- कृति सिर्जना गरेपछि लेखक वस्तुगत रूपमा कृतिमा हुदैन अर्थात् मर्छ भन्नुभएको हो ?
हो, त्यसैले विषयीगत भएर सोच्ने देकार्तेसंग सधैं हाम्रो वैचारिक झगडा रह्यो । वस्तुतालाई उसले जहिले पनि प्रहार गर्यो । हो, म’ भएर नै अरू हुन्छ भन्नु सत्य रहे पनि म-तिमी नरहे सापेक्षकि रूपमा पो वस्तु रहन्न तर यथार्थमा म-तिमी नरहे पनि वस्तु त रहन्छ । यसरी हामीले सोचाइको प्रयोगशालामा लगेर यो कुरा भनेका हौं । वास्तवमा उत्तरआधुनिक कुरा वस्तुता नै थियो । अहिले इन्द्रबहादुर राई भन्नुहुन्छ- तिमीले सोचेका थियौ वस्तुता’ । वस्तुता’ मेरै शब्द हो ।- स्पष्ट भन्नुपर्दा तेस्रो आयाममा वस्तुता’ तपाईंको शब्द रहेछ । सम्पूर्णता र चित्र -बिम्ब) भने क-कसका हुन् त ?इन्द्रबहादुर र्राई झयाप्प समाउने, निक्खर, शुद्ध भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यर्सथमा सम्पूर्णता उहांकै हुनुपर्छ । फेरि वैरागी दाजु बिम्बको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले बिम्ब उहांको हो भन्नु पर्छ तर होइन हामी सबैको हो । खै, हामीले शब्द त बांडयौ कि बांडेनौं थाहा भएन ।- मैले सुनेकी थिएं कि तपाईंहरू कृत्रिम विरही बनेर, कोठामा बसेर कविता लेख्नुहुन्थ्यो रे, हो ?त्यसो त होइन, हामीले त्यसो गरेनौं । जिन्दगीमा मलाई विरह चाहिं पटक्कै लागेन; माया, मोह, स्नेह लाग्यो । हामीले केटीहरू त मन पार्यौं नि त, उनीहरूले मन पारेन पनि हामीलाई । त्यस्ता घटनाहरू त घटे । यो उमेरसम्म इतिहास पर छोडेर आएपछि के-के गर्यो त भन्दा घटनाहरू त हुन्छन् नि । विरह शब्द पो नमिलेको हो कि । फेरि कतिवटा कुरा त गोप्य पनि राख्नर्ुपर्छ नि ।कतिवटा कुरा भनेरभन्दा लुकाई राख्दा आनन्द आउंछ ।.
- यहांको प्रेमजीवन र वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध चाहिं के छ ?
यो चिठीहरू छ नि । मैले त लेखेकै छैन भनेको । डर लाग्थ्यो, सत्य ।- सत्य हो ?घरमा पांच जना नानी भएपछि श्रीमतीलाई म यहां सन्चै छु’ भनेर त लेखें नि ।त्यसलाई प्रेमपत्र मानेर छापे हुन्छ तर खास मेरो जो आदर्शको प्रेमपत्र छ नि । त्यस्तो सायद मैले लेखेको छैनजस्तो लाग्छ ।.
- आदर्शको प्रेमपत्र कतै कवितामा लेख्नुभएको त होइन ?
कवितामा त्यस्तो रोमान्टिक अनुभूति पोख्याजस्तो त लाग्दैन तर दुइ-चार ठाउं कतै -दुइटा फूल द्यौरालीमा संगै राखेजस्तो लाग्छकतै टाढा जांदाखेरि संगै हिंडेजस्तो लाग्छगीत लेख्दाखेरि नि छेउमा त हुदै हुदैन । सांच्चै भयो भने त किन गीत लेखिराख्नुपर्यो नि ।
- गीत चाहिं तपाईंको प्रेमपत्र बनेछ क्यारे ?
माथिको गीत त हाम्रो लोककथै त हो नि । इन्द्रबहादुर र्राईले कठपुतलीको मन’ कथा लेखेर पुरानो कथालाई नयां बनाउनुभयो । हामी सायद, पुरानै प्रेमलाई नयां प्रेम बनाउंछौं । त्यही नै प्रेम गर्ने तरिका हो कि क्या हो ।धेरै भइसक्यो जीवनमा पीडाफेरि आज केको खुसी याद आयोखै यी भावहरू के हुन् । प्रेम गर्या हो र । मन त पथ्र्यो, सत्य मन पथ्र्यो तर के भनूं, कसो भनूं डर लाग्थ्यो । अस्वीकृतिको डर जहिले पनि लागिराख्थ्यो । सत्य । अरूलाई पनि लाग्छ होला । नाइं’ भनेपछि म हारेंजस्तोको डर त हुने नै भयो ।
- त्यसो त यहांले आफ्नो कविताको संसारमा, गीतको संसारमा, आफ्नो लेखनको संसारमा जहिले पनि आफूलाई जित्ने मान्छेका रूपमा मात्र राख्नुभएको रहेछ नि ?
- आफूले हिंडिसकेका बाटाहरू र्फर्केर हेर्दा कति घुमाउरो र अप्ठयारो देख्नुहुन्छ ?
कहिलेकाहीं यसो हेर्छुकस्तो-कस्तो बाटो घुम्दै-फदिर्ै यहांसम्म आइपुगें, कति जंघारहरू नाघें । कहिले हेर्दा भ्रमै हो, यहां आइपुग्नु थियो; आइपुगेंजस्तो लाग्छ तर कहिले-कहिले अरूलाई नपरेकाहरू पनि पो परे कि ।जस्तो लाग्छ ।
- अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा नेपाली साहित्य कसरी हिंडिरहेको छ ?
मलाई अहिले-अचेल विसङ्गतिहरू बढेजस्तो लाग्छ । साहित्य जीवनसितै बस्छ तर यथार्थमा अहिले त्यति सजिलो जिन्दगी छैन नि त । बिहान मान्छे मारिएको समाचार सुन्यो, दिउसो कतै कविता सुनायो । आफ्नै देशमा, आफ्नै परिसरमा दुइटा कतै मान्छे मारिन्छ, कतै दुइटा माला लगाइन्छ । दुइटा मान्छे मर्दा दुइटा माला लगाउन सक्दा रहेछौं हामी । हामी साहित्यकारको स्वरूप त्यस्तो भइरहेछ । यही ठाउंमा शब्दमा होइन यथार्थमै खान नपाएर बसिरहेको छ मान्छे; यही ठाउंमा ठूला-ठूला भाषण गरीकन, ठूला-ठूला सिद्धान्तका कुरा गरेर बसिरहेको छ । यही विरोधभासमा बांचिरहेका छौं, अहिले । यस्तो बेला राजनीतिले साहित्यलाई प्रभाव त पारेकै छ तर पारे पनि मभित्र एउटा प्रश्न जन्मिएको छ कि कवि सांच्चै यो जगत्कै हो कि होइनजस्तो पो लागिरहेछ त ।लेखिएको कविता सांच्चै कविता हो कि होइन । पो भइराखेको छ त, लगाएको माला सांच्चै माला हो कि होइन । लागिरहेछ; उता समाचार त्यस्तो आइरहेछ ।
यर्सथमा जीवन-जगत्संग साहित्यको सम्बन्ध के त ?
आंफैंसित प्रश्न हो, यो । युरोपतिर त पहिलो-दोस्रो विश्वयुद्धको भयङ्कर विसङ्गतिपश्चात् अस्तित्ववादको जन्म भयो, ठूला-ठूला लेखकहरू आए तर यस्तो लक्षण-सङ्केत पनि त यहां छैन । यसरी विसङ्गति नै अघिल्तिर आइरहेको छ ।
- तपाईंका विचारमा मृत्युबोधले जिन्दगीलाई कत्तिको अर्थपूर्ण बनाउंछ ?
आफ्नो मृत्युबोध त अर्काको मृत्यु देखेर बुझने हो । सायद, विशेष मृत्युबोध अब हुदैन होला । पहिला त के भन्थें भने- आफ्नो मृत्यु अरूले मर्नै सक्दैन भनेर बडा फिलिसोफाइज गर्थें, अहिले त आफ्नो मृत्यु अरूले मरिराखेको पो देखिरहेको छु त । मेरो मृत्यु पनि सापेक्षकि हो त भनेर प्रश्न पो गरिरहेछु त । फेरि मर्नु दुख्नु त होइन नि । सक्नु पो हो त । त्यसैले मृत्युलाई छुट्टै व्याख्या पो गर्नुपर्छजस्तो छ ।- तपाईंले आफूलाई छुट्टै राखेर दर्शक बनेर आफ्नो मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न ?
कविर् इश्वरवल्लभलाई दर्शक बनेर हेर्दा एउटा सफल मान्छे चाहिं लाग्दैन । एउटा अपूर्ण मान्छे नै अघिल्तिर बढिरहेजस्तो लाग्छ । यद्यपि जसलाई म पूर्ण देख्छु; त्यो पनि सापेक्षकि अपूर्ण हुन सक्छ ।
वास्तवमै कोही पनि स्वयम्मा पूर्ण अनुभव गर्न किन सक्तैन, मान्छे । जिन्दगी यातनागृह त होइन नि । फेरि पनि किन स्वचेतनाका प्रश्नहरूले किचिएको हुन्छ, मान्छे'हुन्छ-हुदैन, हो-होइन अर्थात् हुनु-नहुनुको यी र यस्तै सूक्ष्म दूरीमा जिन्दगी थाती राख्दै गहिरिंदो रातको व्यस्त सडकमा दाइलाई पुर्याएर म र गीता र्फकन्छौं । कसो-कसो दाइको हार्दिकता झङ्कृत भइरह्यो मनभरि' . Nepali Kala Sahitya.Com bata
Posted by Narthunge at 3:01 AM